တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ဆောင်းရာသီမှာထင်းဘာတွေစားသလဲ။ ဟုတ်ပါတယ် Dolbanina ။ နွေရာသီတွင်အဘယ်အရာကဆောင်းရာသီတွင်ထင်းထင်းသည်ထင်းရှူးပင်နှင့်အပင်ညွန့်အစေ့များကိုစားသည်ဖြစ်စေ၊
lzhke အတွက်မိုဃ်းပွင့်အတွက်အဘယ်မှာရှိရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလယုန်။ အထူးသဖြင့်ခိုင်ခံ့ 40 ကီလိုမီတာအောက်မှာကြီးပြင်းထွက်ပြေးလာသူရှိသော Gonchakov3ကီလိုမီတာခန့်ကကျပ်တည်းစွာလိုက်လုသောငါတို့အကြိုက်ဆုံးရှိစေခြင်းငှါ ...
အဘယ်အရာကိုတိရိစ္ဆာန်များအာဖရိကမှာကိုစားကြလော့။ ငါး မှလွဲ. အားလုံး
အဘယ်အရာကိုတိရိစ္ဆာန်များအာဖရိကမှာကိုစားကြလော့။ cheetah, ခြင်္သေ့, ခှေးအ မှလွဲ. မည်သည့်ငါး။ အရှေ့အာဖရိကရှိမိကျောင်း, hippos, မျောက်, သုက်ပိုးဝေလငါးများနှင့်အစိမ်းရောင်ကြက်တူရွေးကျောရိုး (400 လူသိများမျိုးစိတ်ခန့်) သန္တာမန်များပေါကြွယ်ဝသည်။ ...
အိန္ဒိယဆင်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ? အိန္ဒိယဆင် (Elephas maximus) တောင်အာရှကျယ်ပြန့်ဖြစ်၏ ယင်း၏ဧရိယာအိန္ဒိယ, သီရိလင်္ကာ, မြန်မာ, ထိုင်း, အင်ဒိုချိုင်းနားနှင့်မလေးကျွန်းဆွယ်၏အစိတ်အပိုင်းကိုဖုံးလွှမ်း။ သုံး subspecies ရှိပါတယ်: ဘင်္ဂါလီ (အီး ...
အဆိုပါ Ocelot သူကားအဘယ်သူ
အဘယ်သူသည်အမြီးမှဦးခေါင်းကနေ Ocelot Ocelot အရှည်ဖြစ်ပါတယ် 100 ထံမှ 140 စင်တီမီတာ, 50 စင်တီမီတာနှင့် 10 16 ကီလိုဂရမ်အထိတစ်ဦးအလေးချိန်အကြောင်းကိုအမြင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကုတ်အင်္ကျီအရောင်အဝါရောင်-အညိုရောင် chrnymi နှငျ့အတူရှိ၏ ...
အဆိုပါ macaws အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။ ဝီကီပီးဒီးယားပူဇော်မထားဘူး။ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါ macaws အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။ ဝီကီပီးဒီးယားပူဇော်မထားဘူး။ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ Macaw (Ara) macaw (Ara) Macaw ကြက်တူရွေးကမ္ဘာသစ်ကြက်တူရွေး၏အရှိဆုံးမူရင်းကြိုးနှင့်ချည်နှောင်၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ မိမိတို့ခေါင်းပေါ်၏ရှေ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ...
တိရစ္ဆာန်များအတွက် Belgorod ဒေသ၏အနီရောင်စာအုပ်စာရင်းထားတဲ့
Belgorod ဒေသဒေသ၏အနီရောင်စာအုပ်တွင်မည်သည့်တိရိစ္ဆာန်များကိုဖော်ပြထားသည်ကို Belgorod ဒေသရှိသတ္တဝါများမှကိုယ်စားလှယ်များသည်မျိုးသုဉ်းရန်နီးကပ်လာသည်။ Belgorod ဒေသမှတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်တစ်ရာခန့်ကိုရုရှားအနီရောင်စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဤရွေ့ကားအနည်းငယ်ပါဝင်သည် ...
shilishper ဘယ်လိုငါးမျိုးလဲ ဒီ Lgov အတွက် Turgenev ရဲ့မှာဖြစ်ဟန်လားသခင်ဘုရား Maladets! Maladets! Sheresper or asp သည်ပျားအုံများနှင့်ဆင်တူသော်လည်းအထူးအမျိုးအစား၏ကိုယ်စားပြုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
Tasmanian Wolf ကရှိပါသလော မည်သည့် Tasmanian ဝံပုလွေရှိပါသလား!? သူ့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ရှိပါသလား!? ထိုသူသည်အဘယ်မှာရှိအသက်ရှင်တော်မူသည်!?
Tasmanian Wolf ကရှိပါသလော မည်သည့် Tasmanian ဝံပုလွေရှိပါသလား!? သူ့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ရှိပါသလား!? ထိုသူသည်အဘယ်မှာရှိအသက်ရှင်တော်မူသည်!? Thylacine သို့မဟုတ် tilatsin (LAT ။ Thylacinus cynocephalus) တစ်ခုမျိုးသုဉ်းတိုက်ပြီးသားပိုက်အိတ်နို့တိုက်သတ္တဝါနှင့်သာဖြစ်ပါတယ် ...
ဖားတွေဟာတွားသွားသတ္တဝါတွေလား။ ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများဤရေနေသတ္တဝါများသည်ရေအောက်တွင်ရောမြေပေါ်တွင်နေထိုင်နိုင်သည့်သတ္တဝါများဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ဘ ၀ ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၊ မျက်ရည်စများဖြင့်သူတို့လက်အောက်မှာသုံးနေကြတယ် ...
သဘာဝတွင်ပန်းပွင့်အပင်တ်မှုန်ကူး၏အဘယျနညျးလမျးမြားတည်ရှိ? ပျားဝတ်ရည်စုဆောင်းပန်းပွင့်မှပန်းပွင့်ကနေပျံ! အဘယ်သူမျှမကဤကတ်မှုန်ကူးပါ! သည့်အမည်းစက်၏ pistil ပေါ်တွင်လေတိုက်ရာမှဝတ်မှုန်မှုတ်! လာသောအခါဒါပေမယ့်လေ ... by တ်မှုန်ကူးလျော့နည်းမယ့် ...
အဘယ်အရာကိုသစ်ပင်များ Sochi အတွက်ကြီးထွား?
အဘယ်အရာကိုသစ်ပင်များ Sochi အတွက်ကြီးထွား? လေယာဉ်သစ်ပင်, သစ်အယ်သီးသစ်ပင်များ, စွန်ပလွံပင်များနှင့်အခြား ... ထင်းရူးပင်, အုန်းပင်, သပိတ်ပင်နီကော Anders ဗွန် Hartwiss, ဂျော်ဂျီယာ, Imereti, hornbeam နှင့် Beech အရှေ့, ချိုမြိန်သစ်အယ်သီး, linden ကော့ကေးဆပ်, elm, klen.bereza, သစ်တော်သီး, ပန်းသီး, ကျောက် ...
Amanita ကဲသရိအဘယ်ကြောင့်ဤမျှဟုခေါ်ဝေါ်? ဘယ်မှာကြောင့်ကြီးထွားလာ
Amanita ကဲသရိအဘယ်ကြောင့်ဤမျှဟုခေါ်ဝေါ်? အဘယ်မှာရှိ Amanita ကဲသရိ (Amanita ကဲသရိ) စားသုံးနိုင်သောမှိုမိသားစု amanitaceae (Amanitaceae) ကြီးထွားလာ။ ရုရှားအမည်, အဖြစ်လက်တင်မျိုးစိတ်ကရောမအင်ပါယာ၏အရာရှိခေါင်းစဉ်ကနေလာပါတယ်။ တခါတလေ ...
ဘယ်နှစ်ယောက်သစ်ပင်များယခုနှစ် 1 များအတွက်ကြီးထွားဖို့ကိုထည့်သွင်းဖို့ဒေတာကိုအမြည်းနိုင်ပါတယ်
1: ဘယ်နှစ်ယောက်သစ်ပင်များ 1 သစ်ပင်များနှင့်ချုံဖုတ်အမြင့်တိုးတက်မှု၏နှုန်းအပေါ်ဒေတာဆုံးခနျ့မှနျးနိုငျတစ်နှစ်တိုးတက်မှုနှုန်းမှထည့်သွင်းဖို့အဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။ အလွန်အစာရှောင်ခြင်း (2 မှတက်နှင့်မီတာနှစ်စဉ်တိုးတက်မှုနှုန်းကြီးထွားလာ ...
efa သည်အခြားမြွေများနှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။ efa ဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့မြွေတစ်ကောင်လို့ဘာကြောင့်ပြောရတာလဲ။
efa သည်အခြားမြွေများနှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။ efa ဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့မြွေတစ်ကောင်လို့ဘာကြောင့်ပြောရတာလဲ။ အထူးကွဲပြားခြားနားမှုများမရှိပါ။ မြွေဆိုးများမိသားစု (http://www.floranimal.ru/pages/animal/je/1569.html) 1 ။ ၎င်းသည်ဘေးတိုက်တွားသွားပြီးအလွန်မြန်သော2။ သဲကန္တာရတွင်နေထိုင်ပြီးအရွက်များ ...
နှစ်ဦးစလုံးဝတ်ရည်မိုးမခ? မျိုးပွားမိုးမခရှ။ နီးပါးအသီးအသီး၏အသက်တာ၌တလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်မိုးမခနှင့်အတူချိတ်ဆက်အခြားခုနှစ် (ရင်ခုန်စရာ, ရယ်စရာ) အချိန်လေးရှိဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်သူငယ်ချင်းများနှင့်တစ်ဦးငါးဖမ်းခရီးစဉ်တစ်ခုမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်, သို့မဟုတ်စခွေငျးငှါ ...
ဘယ်ငှက်ကအလှပဆုံးလဲ zebra amadina ကြက်သားသည်အဆင်းလှသောငှက်တစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ )) ငါအမဲသားကိုမစားပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏သတ္တဝါ .. )) အလှဆုံးငှက်တစ်မျိုးမှာ guild amadina ဖြစ်သည်။ သူမသည်သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်သည်။ Crow သူတို့အားလုံး ...
အဆိုပါထူးခြားသော Schmidt ကဘုစပတ်သစ်သား?
အဆိုပါထူးခြားသော Schmidt ကဘုစပတ်သစ်သား? အမြင့်နှင့်အချင်း 2025 စင်တီမီတာအထိ 80 မီတာမရောက်မီသစ်ပင်, အတော်လေးမကြာခဏဖြစ်ပျက်သော Cylinder ပုံစံသို့မဟုတ်စည်, နှင့်တကွ, ပင်စည်အပေါ်မောက်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာကနေစတင်ရှိ၏ ...
အများအပြားပင်ဂွင်းမျိုးစိတ်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာတည်ရှိ? မြေပြင်တွင်, 18 pingvinov.Vse မျိုးစိတ်အသိုက်ကို Southern hemisphere ၏ကျွန်းများနှင့်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်, သာ Galapagos ပင်ဂွင်းအီကွေတာပေါ်နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပင်မြောက်ပိုင်းတွင်နေထိုင်သော ...
သင်တစ်ဦးခရုအံသွားရှိပါသလား ဟုတ်တယ်သူတို့ကဘာသာစကား၏ 25 ရဲ့အံ့သြဖွယ်သဘာ 000 !!! အဲဒီမှာ! 25 000 အံသွားအကြောင်းကိုခရုပါ။ ဘာသာစကားခရု radula မြောက်မြားစွာ chitinous သွားများနှင့်ဖုံးလွှမ်း float တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ, တပ်ဆင်ထားသည်။ ...
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 24 Next ကို 's Page